I-American Flat - Ferreira Hospedagens - I-Airbnb
I-American Flat - Ferreira Hospedagens
Ponta do Farol, Maranhão, i-Brazil
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Ferreira
Ifulethi elise-São Luís linekamelo lokulala elingu-1 futhi likwazi ukuhlala abantu abangu-3.
Ifulethi lithokomele, lihlome ngokuphelele, futhi lingu-35 m². Inokubukwa kwe-waterfront.
Indawo itholakala endaweni engamamitha angama-50 ukusuka ogwini lwesihlabathi, 300 m ukusuka esitolo, 20 km ukusuka esikhumulweni sezindiza, 300 m ukusuka echibini, 20 m ukusuka endaweni yokudlela, 5 km ukusuka , 20 km ukusuka .
Indawo itholakala endaweni engamamitha angama-50 ukusuka ogwini lwesihlabathi, 300 m ukusuka esitolo, 20 km ukusuka esikhumulweni sezindiza, 300 m ukusuka echibini, 20 m ukusuka endaweni yokudlela, 5 km ukusuka , 20 km ukusuka . Indlu isendaweni elungele izingane eduze nolwandle.
Indawo yokuhlala ifakwe lezi zinto ezilandelayo: i-lift, ibha encane, i-inthanethi (i-Wi-Fi), ukufudumeza okuphakathi, isimo somoya kuwo wonke amagumbi okulala, igaraji isakhiwo esifanayo, i-TV engu-1, isathelayithi ye-tv.
Ekhishini likagesi, izitsha / okokusika kanye nezitsha zasekhishini kunikezwa.
4.31 · 29 okushiwo abanye
Hlola ezinye izinketho ezise- Ponta do Farol namaphethelo